Miady ho an'ny Zon'olombelona isika! amin'ny alàlan'ny www.PixelHELPER.org
Raha sendra manana olana ianao ary tsy fantatra izay hatao manaraka dia tadiavo ilay PixelHELPER
Fahatsiarovana Holocaust Marrakech ho an'ireo LGBT hadino niharan'ny jadona Nazi tao Maraoka. Noravan'ny governemantan'i Maraoka manohitra ny LGBT.
Pixel Mpanampy mitodika maneran-tany Tambajotra mpikatroka sy mpanakanto ho an'ny zon'olombelona ny tarehy Faneriterena & ho an'ny fahalalahana maneho hevitra miady. Miaraka amin'ny zava-kanto tiantsika olana ara-tsosialy lehibe manondro. Miasa ihany koa izahay Tetikasa fanampiana amin'ny fampandrosoana any Afrika, ny Sakafom-mofo mamokatra mba hampitomboana ny Ny fahamarinan-tsakafo for Tobin'ny mpitsoa-ponenana, Faritra misy ady sy loza voajanahary mofo maharitra ao amin'ny lakana. Mitombo ny Fiarovana ara-tsakafo any Afrika, Ao amin'ny faritra Fanampiana vonjy maika PixelHELPER dia manandrana eo akaikin'ny orinasa misy mofo voanio any Afrika izay akaiky Tobin'ny mpitsoa-ponenana UNHCR hanokafana hopitaly tavoahangy finday kely. Ampianaro izahay amin'ny Manome fanomezana entana ary manohana ny asan'ny fikambanana.
Angela Merkel dia manolotra fialokalofana ara-politika amin'i Julian Assange. Sariitatra kanto horonantsary
Ny Humor dia mamorona vondrom-piarahamonina! Raha mbola amintsika maha-olombelona,Liebe ary hatsikana mifandray, tsy maninona izay aminay mampisaraka, Mampirisika azy ireo ny fihomehezana fandeferana, Ny fandeferana mahafaly amin'ny madio hatsikana, amin'ny haben'ny maimaimpoana toetra no manamarina, tena tanjona ny olona Sein.
Fikomiana maivana ao amin'ny Hotel Sonnenbichl, seza alemà ilay mpanjaka nampijaliana an'i Thailand.
Amin'ny alàlan'ny artistic work Andao isika hanao izao tontolo izao toerana tsara kokoa ary hitarika azy fiovana lehibe eo amin'ny fiaraha-monina, mikendry lalina demokrasiaAmin'ny anaran'ny fandeferana tokony Pixel Mpanampy mitaky ny zo, ny tsy fandeferana tsy milefitra. Mifantoka amin'ireo tetikasa ho an'ny kanto fahafahana, zon'olombelona sy manohitra Ny fankahalàna Jiosy.
Ataovy zavatra tsy mety amin'ny antony marina!
Ny tantara momba ny famonoana olona tany Maraoka tao amin'ny Wikipedia dia tsy nanonona mihitsy ny tobin'ny mpiasa andevo tany an'efitra maty ny Jiosy. Ny fahatsiarovanay dia nopotehin'ny Minisiteran'ny Atitany maraokana taorian'ny fananganana herintaona. Tamin'izany no nitondranay ny lohahevitry ny asa an-tery ao amin'ny tantaran'i Maroc ao amin'ny Wikipedia mba hiadiana amin'ny hosoka ara-tantara sy ny fanoherana ny Semitism. Ary na dia fametrahana zavakanto hatramin'ny voalohany aza izy io mba hanasongadinana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona an'i Shina amin'ny Uyghurs.
maty Pixel Mpanampy miady amin'ny tambajotran'ireo mpikatroka sy artista manerantany fomba mahazatra manohitra olana ara-tsosialy. Ireo mpanakanto mpandray anjara dia matetika mampiasa ny teknolojia farany sy ny fitaovana fanesoana rehetra hametrahana olana eo amin'ny fifantohan'ny fampitam-baovao.
Ny tsy fahampian-tsak'ity izao tontolo izao, tsy mandeha tsara, tony sy miadana, tsy misy tahotra amin'ny loza, ary manana tanjona ambony ao an-tsaina, hiaro ny tany. Ny finoana fototra ananantsika dia ny famerenana ny foto-kevitry ny Revolisiona Frantsay ho "fahalalahana, fitovian'ny maha-mpiray tam-po ara-pirahalahiana" mba hiadiana amin'ny fampodiana ny tsy firaharahiana politika.
Fandringana ny Walter Lübcke mural nataon'ny governemanta Maraokana.
Ny filohan'ny Bundestag Wolfgang Schäuble dia nilaza tao amin'ny Bundestag izay Lübcke "Misokatra amin'ny fidirana amin'ny fananganana fiaraha-monina misokatra antsika: ho an'ny fahamaotinana, ny fandeferana ary ny maha-olona. Loza maneran-tany ny fahalalahan'ny zavakanto Koa i PixelHELPER!
Ny mpanorina ny PixelHELPER dia ilay mpanakanto maivana Oliver Bienkowski avy any Alemana. Ireo mpanakanto hazavana sy hetsika hafa ary mpanao sariitatra maro dia miparitaka erak'izao tontolo izao ary miara-miasa ho an'ny PixelHELPER ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa.
Firy amin'ireo zanakay vavy no very anay Diamondra diamondra ao Bielefeld, ka ny Bonzes any Sierra Leone afaka mihira "Ny diamondra no tovovavy sakaiza indrindra ”, Ankehitriny koa izy ireo dia tonga manerana an'i Mediterane ary mbola maniry izany hatrany izy ireo Miaina ao an-tanànanay.
ny Feno lavitra ny fo, aber ny fahafaha-manao zavatra dia finaritra.
Isika. Ny rafitra tabilao systematic dia toy ny fitaovana tena ilaina amin'ny stylistic
Iza ireo PixelHELPERS?
Robin Hood Fantatry ny rehetra. Ilay malaza Natao jiolahy manambady mpifanandrinaizay mbola azo atao ny zavatra ataony malaza dia ho mihoatra ny an'ny tany am-boalohany. miaraka PixelHELPER International miady hevitra Artista Internationale 70 ho an'ny iray tontolo tsara kokoa, alaivo amin'ireo manankarena any Eropa ary omeo ny mahantra manerantany. Efa eo isika. Miaraka amin'ny valalabemandriny mahatoky manana PixelHELPER ho fikambanana ho an'ny zon'olombelona ny foiben-toerany Africa hita. Nandritra ny taona dia niady izahay Sakaiza sy mpiaro ny mahantra ary toy ny fianianana fahavalo ireo izay Hery sy harena ny Fampijaliana fanararaotana.
Fanampiana vonjy taitra any Maraoka
"Ny PixelHELPER dia mampiditra ny sakana fananganana revolisionera ho zavakanto sy satire amin'ny asany"
hoy i Kolontsaina radio any Alemana
"PixelHELPER dia iray amin'ireo mpampiditra vaovao indrindra ny zavakanto hetsika politika ary mijoro amin'ny endrika kanto nitarina," hoy ny sasany. Hoy izahay: Ny zava-kanto dia tsy maintsy miteraka fanaintainana, fihantsiana ary fikomiana. Izahay dia miahy ny zavakanto ho toy ny endrika fahatokisan-tena ara-tsosialy amin'ny fanahin'ny fahazavana. Ny fampielezan-kevitray dia mampiseho ny mety ho zavakanto amin'ny maha fahefana fahadimy ao amin'ny fanjakana. Noho izany ny zavakanto dia tsy fitaratra izay hazoninao amin'ny zava-misy, fa marotoa ampianao azy.
Fantatsika ny fahafaha-manao.
Mianatra isika. Izahay dia milalao. Mampivelatra hevitra izahay. Manome hevitra avy amin'ny maizina izahay. Mampiasa ilay contrat izahay. Manao zavatra mahavariana izahay, na manimba zavatra. Mifantoka amin'ny fomba fijery isika. Mifandray izahay. Manova ny fomba fijerinao ianao. Miasa ao anaty alokaloka isika. Mikaroka ny antony amin'ny fahazavana izahay. Manome valiny isika. Mijoro isika. Miampanga antsika. Miara-milalao miaraka amin'ny jiron'ny hazavana ao am-pontsika isika. Izahay dia mitondra azy any ivelany.
Ary hoy izahay: isika no PixelHELPER
Ny osa dia mifamatotra koa
Mivoaha ary manaporofo ny tenanao.
Ny kibon'ny PixelHELPER dia nandeha nanerana izao tontolo izao.
Ny famahana ny Rubik Cube ao amin'ny horonantsary "Manerana an'izao tontolo izao ao anatin'ny 80 andro" dia tandindon'ny vondron'olom-bitan'ny zanak'olombelona eraky ny tany, izay mamolavola PixelHELPER amin'ny endriny mivantana miaraka amin'ny fampiharana crowdfunding mivantana ao amin'ny Android Playstore ary manasa ny mpijery hifampiresaka.
Mandritra ny androm-piainana dia mamela marika maro isika. Na dia eo amin'ny fiainan'ny olon-kafa aza ny lalana izay mety hiampitantsika indray mandeha ary nirotsaka be dia be izahay ka nanova zavatra hafa ny fiainan'izy ireo tatỳ aoriana. Tsy misy fankasitrahana lehibe kokoa amin'ny asan'ny PixelHELPER Foundation noho ny fiantraikany maharitra eo amin'ny fiarahamonintsika.
Miady amin'ny fitiavan-karena ho an'ny tontolo tsaratsara kokoa isika.
Humanism ho toy ny traikefa ifanakalozana amin'ny renirano mivantana. Fehezo ny fizarana amin'ny alàlan'ny emotika ao amin'ny Facebook. Tsy manana firazanana, na loko, na fivavahana i Zombies; ati-doha fotsiny! Ilay tetikasa "Zombies without Bounds" dia mihevitra ny tenany ho toy ny sehatra mifanakaiky fanampiana. Ny anarana dia nalaina tamin'ny solosaina zombie marobe izay fehezin'ny ivelany. Ny tanjonay dia tsy inona fa vahaolana amin'ny loza voajanahary amin'ny maha-olona amin'ny alàlan'ny fanampiana iraisan'ny mpijery amin'ny alàlan'ny renirano mivantana. Ny tanjonay: 24 ora mivantana avy eo amin'ireo toerana mafana eto an-tany. Ireo mpitati-baovao miaraka amin'ny faritra ady, mizara fanampiana any amin'ny tobin'ny mpitsoa-ponenana na mpihaza mpihaza ao amin'ny Valan-javaboary Kruger. Ny fahafahan'ny fanaraha-maso ataontsika dia tsy misy fetrany .Fitaovanay: Ny Facebook emoticons dia mifehy ny vovoka mpanampy ary manapa-kevitra izay hatao.
Amin'ny lafiny ara-teknika dia miasa toa izao ny fanombohantsika ony mivantana misy singa mangarahara ary avy eo manasa ireo mpiasa "Zombies tsy misy fetra" ho an'ny stream mivantana antsika. Amin'izany fomba izany no hijerentsika ny choreography an'ireo singa mifehy ny fifandraisana ary hihetsika haingana amin'ny fiovana amin'ny ony mivantana eo amin'ny toerana misy ny krizy.
PixelHELPER Foundation | Fanolorana ny fampiharana any Marrakech, Maraoka
2009 nanome Attac solontena ny mpanorina ny teboka Mpanampy vidiny "manomboka ny ny revolisiona" ny asa ho an'ny tsy manan-kialofana.
2013 nanomboka teboka Mpanampy ny tsy manan-kialofana Shit Storm fanentanana, izay maro ny haino aman-jery alemà tonga tao, anisan'izany ny Süddeutsche Zeitung amin'ny endri-javatra lahatsoratra eo amin'ny asa.
2014 10 dia tezitra tamin'ny fanentanana tao amin'ny Masoivoho Amerikana, ny NSA / drôna fanafintohinana ka nihatra any haharaka ny fisondrotana ny lohahevitra isan-kerinandro ao amin'ny haino aman-jery.
Tamin'ny 2015 ireo mpivarotra fitaovam-piadiana vaovao an'ny Dr. Ny Oetker Group dia nanjary fantatry ny firenena manontolo tamin'ny alàlan'ny vinavinan-jiro maivana tao amin'ny Ministeran'ny Fiarovana Federaly tamin'ny alina.
Avy amin'ny Avana
Ny fanentanana "Ny fitiavana Tsy misy sisintany mametra" ny teboka Mpanampy te ho fanoherana ny fanenjehana ny pelaka ao amin'ny firenena tsy refesi-mandidy eto amin'izao tontolo izao. Mbola misy koa ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao toy ny Iran, Nigeria, Maoritania, Sodana, Yemen, Arabia Saodita, na ny Emira Arabo Mitambatra, izay tsy ara-dalàna ny firaisan'ny samy lehilahy sy saziana ho faty!
Ny fitiavana dia tsy mahalala lahy, tsy misy loko na fivavahana. Ny fitiavana dia tsy misy fetra! Te-hanaparitaka ity fanambaràna ity, ny PixelHELPER, manerana izao tontolo izao miaraka amin'ny tetikasan-javatry "zavamaneno avy any avaratra".
Kapoka mangatsiatsiaka ho an'ny olona tsy manan-kialofana
Akaiky ny ririnina ary mila ny fanampiantsika ny olona tsy manan-kialofana. Vahaolana: ny kapsily vonjy taitra mangatsiaka PixelHELPER hisorohana ny olona tsy ho atin'ny hatsiaka amin'ny arabe any Alemana. Isan-taona dia vitsy ny Alemanina maty noho ny fianjeran'ny fiaramanidina noho ny olona tsy manan-kialofana maty maty. Any Alemana dia mihoatra ny antsasaky ny tapitrisa ny tsy manan-kialofana ivelan'ny harato ara-tsosialy. Imbetsaka ny olona no alefa any ivelan'ny varavarana rehefa ambany ny zero ny mari-pana ary avy eo matin'ny hatsiaka mafy ny fahafatesany. Ary ny olan'ny tsy fananan-kialofana any Alemana ihany dia tsy resahina amin'ny fomba maharitra. Eo no manomboka ny fandaharanay fampidirana ho an'ny tsy manan-kialofana. Manomboka amin'ny kapsily vonjy taitra mangatsiaka hiarovana ny tsy manan-kialofana amin'ny fahafatesana mora azo sorohina, manangana rafitra miady amin'ny olana lehibe amin'ny tsy fananan-trano isika, tsy fisian'ny filaminana, tsy misy ny asa sy ny fanilihana ara-tsosialy, ka manampy ny olona hiverina amin'ny fiainana ara-dalàna. manome fahafahana.
Vitanay kely fotsiny ny saribakoly eo amin'ny planeta madinika izay manangona kintana goavambe.
Raha sendra manana olana ianao ary tsy fantatra izay hatao manaraka dia tadiavo ilay PixelHELPER Novambra 15th, 2021Oliver Bienkowski
fitaovam-piadiana Android App Bahrain 13 Federal Chancellery Serivisy serivisy federaly Serivisy fanoratana marevaka voaroy afo Shina fanangonam-bola Erdogan afo fampijaliana freeRaif fanehoan-kevitra malalaka Hercules fanampiana mahaolona fampielezan-kevitra fampielezan-kevitra Katalonia landmines Ny fitiavana dia tsy misy fetra LiveStream Live renirano Fanampiana mivelona an-trano Loreley Maraoka mine NSA tao an-trano Oberwesel gadra politika Rainbow for Orlando fiadiana Arabia Saodita nivangongo Help Frantsay lohataona Spirulina Uighurs Uyghur fiarovana ny tontolo iainana fahaleovan-tena United Stasi of America upcycling fitaovam-piadiana ny varotra Eny ezahantsika scan! fanaraha-maso